I-DXF: okufanele ukwazi ngale fomethi yefayela | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Kungenzeka ukuthi uze kule ndatshana ngoba uyazi ifayela le- amafayela ngefomethi ye-DXF futhi udinga ukwazi okuningi ngabo, noma umane nje ngenxa yelukuluku ngoba ubungabazi. Kokunye nakokunye, ngizozama ukukubonisa zonke izinto eziyisisekelo kakhulu okufanele wazi ngale fomethi yefayela ebaluleke kakhulu emkhakheni wedizayini.
Ngaphezu kwalokho, kufanele wazi ukuthi kuningi isoftware ehambisanayo ngale fomethi, hhayi i-AutoCAD kuphela engagcina ukwakheka noma iyivule ku-DXF. Eqinisweni, amathuba amaningi kakhulu ...
1 Yini i-DXF?
2 Isoftware ehambisanayo
3 Ukuphrinta kwe-3D ne-DXF
4 I-DXF yokuphrinta kwe-3D ne-CNC
I-DXF yisichazamazwi sesiNgisi esithi Ifomethi ye-Darwing Exchange. Ifomethi yefayela enesandiso se-.dxf esisetshenziselwa imidwebo noma imiklamo esizwa ikhompyutha, okungukuthi, ye-CAD.
Autodesk, umnikazi nonjiniyela wesoftware edumile ye-AutoCAD, nguyena owadala le fomethi, ikakhulukazi ukunika amandla ukusebenzisana phakathi kwamafayela e-DWG asetshenziswa yisoftware yayo nezinye izinhlelo ezifanayo emakethe.
Vuka okokuqala e 1982, kanye nenguqulo yokuqala ye-AutoCAD. Futhi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ama-DWGs aya ngokuya eba yinkimbinkimbi, futhi ukutholakala kwayo nge-DXF kuye kwaba nzima. Akuyona yonke imisebenzi ehambisana ne-DWG ehanjiswe ku-DXF futhi lokhu kuholela ezinkingeni zokuhambisana nokungafani kahle.
Ngaphezu kwalokho, i-DXF yadalwa njengohlobo lwefayela lokushintshanisa umdwebo ukuze libe yifayela le- ifomethi yendawo yonke. Ngale ndlela, amamodeli we-CAD (noma ukumodeliswa kwe-3D) angagcinwa futhi asetshenziswe enye isoftware noma okuphambene nalokho. Okusho ukuthi, wonke umuntu angangenisa noma athumele kusuka kule fomethi kalula.
I-DXF inesakhiwo esifana ne-database yokudweba, egcina imininingwane ku- umbhalo osobala noma okubili kokuchaza isakhiwo nakho konke okudingekayo ukwakha le kabusha.
Kukhona okungapheli izinhlelo zokusebenza zesoftware engaphatha lawa mafayela ngefomethi ye-DXF, amanye angavula kuphela abonise nemiklamo, amanye angangenisa futhi athumele futhi aguqule ukwakheka.
phakathi uhlu lwesoftware eyaziwa okungahambisana ne-DXF kungaqokomisa:
I-Blender (kusetshenziswa iskripthi sokungenisa)
I-Microsoft Office (iZwi, i-Visio)
Isitolo Sopende Pro
Ngokuvumelana ne umsamo osebenza ngayo ungasebenzisa uhlelo lokusebenza olulodwa noma olunye. Ngokwesibonelo:
Android- Ungasebenzisa i-AutoCAD etholakala kumadivayisi eselula futhi yamukela i-DXF.
Windows- Ungasebenzisa futhi i-AutoCAD ne-Design Review phakathi kwabanye, njengeTurboCAD, CorelCAD, CorelDraw, ABViewer, Canvas X, Adobe Illustrator, njll.
macOS: Kunezinhlelo eziningi ezithandwayo zokwakhiwa, enye yazo yi-AutoCAD, kepha futhi une-SolidWORKS, DraftSight, njll.
Linux: enye yezinto ezaziwa kakhulu nezisetshenziswa kakhulu yiLibreCAD, kepha futhi ungasebenzisa iDraftSight, Inkscape, Blender, FreeCAD, njll.
Isiphequluli: ukuvula i-DXF online, ngaphandle kwesidingo sezinhlelo, ungazenza futhi kusuka kusiphequluli sakho osithandayo kusuka ku- I-ShareCAD noma futhi IProfiCAD.
Futhi-ke, kukhona amathuluzi aku-inthanethi nawasendaweni ukwenza ukuguqula phakathi kwamafomethi wefayela ahlukile, kufaka phakathi i-DXF. Ngakho-ke, ungaguqukela kuye noma usuke kwezinye izinhlobo ngaphandle kwezinkinga. Noma ngingaqinisekisi ukuthi idizayini izofana noma okuthile okungalungile ...
Ukuphrinta kwe-3D ne-DXF
Uma usebenzisa i- Iphrinta ye-3D kufanele wazi ukuthi kukhona nesoftware ye- guqula phakathi kwamafomethi ahlukile inohlonze impela. Kuyindaba yalezi ezinye izindlela ezimbili:
I-Meshlab: isoftware yomthombo ovulekile, ephathekayo, futhi esetshenziswa kabanzi ukucubungula nokuhlela ama-meshes e-3D. Ungakhipha izinto ngamafomethi ahlukene, njenge-OBJ, OFF, STL, PLY, 3DS, COLLADA, VRML, GTS, X3D, IDTF, U3D kanye ne-DXF. Iyatholakala ngeLinux (kokubili kumaphakeji we-universal Snap naku-AppImage kunoma iyiphi i-distro), i-MacOS, neWindows.
I-MeshMixer: iyefana neyangaphambilini, enye indlela. Kulokhu futhi kumahhala futhi kuyatholakala nge-MacOS neWindows.
I-DXF yokuphrinta kwe-3D ne-CNC
Ngokwanda kwe- Ukuphrinta kwe-3D nemishini ye-CNC Embonini, amafayela e-DXF abaluleke kakhulu. Kufanele wazi ukuthi kukhona amanye amawebhusayithi akuvumela ukuthi ulande amafayela we-DXF anemiklamo eyenziwe ngomumo yokwenza lula ukwakhiwa kwezinto. Ngaleyo ndlela, ngeke kudingeke uzenzele ngokwakho, okusiza kakhulu, ikakhulukazi uma ungazi ukuthi ungaphatha kanjani isoftware ye-CAD.
Kukhona amanye amawebhusayithi akhokhelwayo, okungukuthi, kufanele ukhokhe okubhaliselwe ukuze ukwazi ukufinyelela kumadizayini futhi uwalande ngokukhululeka. Abanye kunjalo mahhala, futhi ungathola okuncane kwakho konke. Kusuka kumalogo alula ukuze ukwazi ukuwakha kusuka ku-DXF elandwe ngomshini wakho, ezintweni, imihlobiso, ifenisha, amapuleti, njll.
Isibonelo, uma ufuna ukuqala ukuhlola i-DXF kunoma yiziphi izinhlelo zesoftware ezibalwe ngaphezulu, ngincoma ukuthi usebenzise olunye lwalezi amawebhusayithi wamahhala:
DXF Ukuze CNC
Idizayini ye-DXF CNC
Amafayela we-CNC DXF
Ngakho uzojwayela ifomethi ngale miklamo, noma uvivinye umshini owuthengile ukuze ubone ukuthi uyawenza kahle umsebenzi wawo yini ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » I-DXF: okufanele ukwazi ngale fomethi yefayela